Gandummaan Faallaa Oromummaa ti -
Gandummaan Faallaa Oromummaa ti
Duraan dursee barreeffama gabaabaa kana akkan dhiheessuu kan nataasise yeroo ammaa kaana vedio Obbo Daniel Dafaa Dr. Mararaa Gudinaa qeequudhaan dhihessee waliin walqabatee yaadota deemaa jiran dha.
Namoonni bayyeen quuqama garaa keessaa utuu qabanii Oromummaa diigaa, qabsookeenya gufachiisa jachuun yaada kennuu irraa of-qusatu. Akka ilaalcha kiyyaati dhugaa dubbachuun fi bakka haqni jalate jiru calisanii bira darbuun dhibdee jiru furuu hin danda’u. Akkaataa itti rakkoo keenya dhiheefannu fi akkata itti walqeeqnutu rakkoo fida malee rakkoo jiru ifa baasaanii muli’isuun mataa isaatti rakkoo miti. Wali-irratti dhukubaa fi gadoo qabatanii qabsoo bilisummaa Oromoo waliin milkeessuun hin dandaa’amu. Kanaafis garaa keessatti jibbaa qabatanii yeroo wal-argan qofa sirba: ‘Tokkumaa Tokkuuma yaa ilmaan Oromoo tokkumaa’ jedhu sirbuun essaanuu nama hin ga’u.
Vedion Obbo Daniel Dhiheessee kun kan yeroo isaa eegatee miti inni jedhu akkuma jirutti ta’ee garuu qabiyyee ergaa isaa garuu gadii fageenyaan hubatumuu waan qabu natty fakkaata. Akkaataa hubannoo kootti bareefamaa fi yaada (comment) adda addaa dhimma kana irratti dhihaatan yoon ilaalu qabiyyee ergaa Obbo Daniel irratti nama xinxaala kenne hin argine. Dr. Mararaan waaggoota dheeraan dura maqaa xureessii fi duula gandaa fi amantii ilmi Oromoo tokko ka biraa irratti gaggeessuu hin dandeenye bane ture. Namani kun hara’a gaggeessaa dhaaba siyaasaa Oromoo tokkooti. Hogganni dhaaba siyaasaammoo waan hojjatef itti gaafatama fudhachuu qaba. Waan ta’ee kun badii dha yookaan sirii ture jechuu irraa eegama.
Egaa wanti nama dhibuu gochaan Dr. Mereraa yeroo sanaa, akkamitti akka bira darbame ifa miti. Inumaayyuu namoonni yaadaa deggeersa Dr. Meraraaf kennan hedduun isaanii maalumaaf Dr. meraraan xuqama jechuun duula gandaa tokko (Wallagaa) irratti bananii jiru. ‘Warraa sanaa’,’ isin’ jachi jedhuu deddebi’ee mula’ata. Kanarraa ka’uuniis warri Dr. Maraa yaadaan deggeraan ( keesumaa biyyaa alaa kana keessatti ) irra caalaan isaanii Oromummaa qofa irraa kaa’anii dagaru jachuuf nama rakkisa.
Haala walfakkaataan gannoota dheeraaf Gaggeesitoo ABO duraanii irratti dhagaan guraama ture hara’as hin dhabbaannee. Kan nama ajaa’ibu garuu warra dhagaa kana guru keessaa gareen isaanii namuma gandaa hogganaan abaaramu sun kan keessa bahe ta’uu isaati.
Walumaa galatti, Oromummaan dagaageeraa, saboonumaan cimeeraa jedhanii dhadachuun qofa gatii hin qabu. Rakkowwan fi bakka badiin jiru adda baafatanii sirreessuu barbaachisaa natti fakkaata.
Tags gandummaa tufaa
Previous Mootummaan abbaa hirree wayyaanee uummata Oromoo magaalaa Amboo fi naannoo ishii dararuu fi ukkaamsuun hojii guyyuu guyyuu isaa tahuun daran jabaachaa deemaa jira.
Next UN Experts Urge Ethiopia to Stop Using Anti-Terrorism Legislation to Curb Human Rights